Ezinye sithambekele cabanga lo msebenzi, njengoba Umdwebo izindonga egumbini lokugezela, njengokukhethwa kukho isabelomali. zingabantu ngokwengxenye kwesokudla. Kodwa kuphela uma uhlela ubambe ubuso-lift ukuze kube nendawo enkudlwana zinhlobo priglyadnogo. Kodwa uma ubeka Ngomzamo omncane nje ngaphezulu ngokuya ukulungiselela ebusweni, plus futhi usebenzise umcabango, kungenzeka ukwenza yokugezela ekhangayo. Ngaphezu kwalokho, ngezinto zokwakha zesimanje ngenxa yokudweba namuhla izinga okusezingeni eliphezulu ukuze uvumele ukuthola ebusweni ukuphela, okuyinto abamesabi dampness kanye umswakama. Futhi kwaba ithonya lezi zici kukhonjelwe kakhulu egumbini, njengoba yokugezela. Ukudweba izindonga, aphethwe ngayo impahla kahle nendawo futhi kuhambisana Nomgomo ubuchwepheshe ezidingekayo, kodwa namanje eyenziwe mklamo wakhe project siqu, ekugcineni sizonikeza Igumbi tekusebentisa limnandi. Ngenhlanhla, ngeke kusaba khona, mumbi khulu ukudlula ngokwayo, ehlotshiswe tile Ceramic. Yiqiniso, kuzodingeka basebenze kanzima. Angicabangi ukuthi kwanele ngiyontengantenga kwamahora ambalwa roller futhi - voila! - ungajabulela umsebenzi. Le nqubo futhi isikhathi eside ngokwanele, ikakhulukazi uma handyman uya ukujabulela hhayi kuphela yokugezela elilungisiwe akuyona unyaka owodwa, kodwa futhi ukubukisa ngamakhono abo phambi abangane nomndeni. Futhi adinga indlela olunzulu. Thina, ngakolunye uhlangothi, uhlose kancane lula umsebenzi wakhe, echaza indlela ukuthi Umdwebo izindonga egumbini lokugezela. Yini okudingeka uyenze umsebenzi othile yenziwe, kanjani ukukhetha impahla, plus abanye design imibono original - uzothola kuyo ukubuyekeza kwethu.
Penda izindonga egumbini lokugezela - sokugcina we inqubo ende, esakhiwa ukulungiselela ngokucophelela base nisondele abanekhono kukhethwa impahla. Ngesikhathi esifanayo kufanele sikhumbule ukuthi upende - do Ungathayili, ngeke ukufihla amaphutha, kunalokho, kunalokho, kuzobalwa kuphela sikhulise kubo. Ngakho-ke, izindonga kumele ibe cishe ngokuphelele flat futhi lushelele ngangokunokwenzeka umphumela. Ngokuqondene upende uqobo, kukhona kuqala ukuthenga intandokazi yakho engasebenzi, uma kuphela ngoba kumele kube efanelekayo ilitshe akhethiwe, okungukuthi ukuba amelana umswakama kanye nomswakama. Mhlawumbe, ngokukhetha bese uqala.
Paint ukunikela yokugezela
Njengomthetho, konke kuqala zonke sinake vodoemulsionku okuthiwa. Lena okufana lalivamile esetshenziswa kulolu hlobo ukulungisa, njengoba Umdwebo izindonga endlini yangasese. Kodwa! Okuwukuphela plus we indaba - ezishibhile. Ngaphezu kwakho konke lokhu okuhle upende akudingeki, ngoba engenzi ukumelana egeza njalo futhi ngokushesha ulahlekelwe ukubukeka zako ezikhangayo. Ngakho-ke (bonke okufanayo ukonga eziyihlazo) ukusebenzisa zizinhle kuphela ophahleni, lapho amanzi ngokuvamile uthola okungenani. Ukuze izindonga kunconywa ukuthenga acrylic noma latex upende. Zombili lezi izinhlobo amanzi nemithi, kodwa abe "ukuphefumula isakhiwo", ngakho zibe izindonga bangaveziwe ukhunta futhi ukugeza ephelele. Uma isimo ivumela esikhwameni "ukusula up", kutuswa ukuthenga abicah noma upende silicate. Lokhu kwaziswa kuyinto ngempela eqolo, kodwa babemboza izindonga iminyaka eminingi ziyojabula kubanikazi eyigeza, futhi adambise lokunakekela, kanye nokusebenza kakhulu.
Mat noma isicwebezelisi?
Penda ngenxa yokudweba izindonga yokugezela kungaba matte noma ecwebezelayo. Yini lokukhetha? Kukhona khona nenqubomgomo eyodwa - okuyinto ngaphezulu kuya esilindele we umninindlu. Ungathanda abe ngaphezulu shiny - ukuthenga upende ecwebezelayo. Ingabe ufuna ongaphakeme-key enamathela ezihlakaniphile - ukuthenga matte. Cabanga ngalesi esisodwa: luthi alufane ecwebezelayo kudinga surface ngokuphelele bushelelezi, njengoba kungabonwa ngisho ukukhubazeka kulencane.
Sinini Umdwebo izindonga egumbini lokugezela, umklamo kungekho ayibalulekile kunalokho umsebenzi wokwenza amalungiselelo. Ngqo ku ngokwabo imibono design isikhala, sizobe ukukhuluma kamuva, ngalesi usesimweni, Ngithanda wazi lokhu okulandelayo. Nomaphi lapho design ikhethwa, ke ngabe yikuphi okudinga khona ukwakhiwa umbala udayi. Kungenzeka ukuthi ngisho into ephilayo yohlobo olufanayo. Uyithola kanjani i-umthunzi oyifunayo? Eza ngaphezulu ezilula ngokuvamile: uthole upende omhlophe njengoba base, kanye amabhodlela ambalwa caramel, anezela futhi akhiqize umthunzi oyifunayo. Kodwa! Kuhle ngempela, kodwa izingoma ezinjalo, ngeshwa, akuzona ukumelana kakhulu. Ngokuhamba kwesikhathi, lokhu kwenza umbala obomvana ulahlekelwa ukukhanya yayo phezu ngesigezo njalo izindawo avele, yingakho ukuhlupheka ukubonakala emagcekeni. Ngakho-ke kungcono ukuthenga ingxenye ngomumo-ezenziwe emthunzini kunesidingo. Uma ungayitholi ezifana design yokudweba yokugezela izindonga kudinga umbala othize (noma ngaphezulu), ungasebenzisa imisebenzi izinkampani ezikhiqiza tinting ngopende omhlophe, kodwa ukusetshenziswa kobuchwepheshe olukhethekile lwe-computer, kunangegunya banal caramel ngokungeza ngokuvumelana nesimiso "by iso". Phela, inketho yokugcina iyona nenzuzo kakhulu uma kwenzeka lokho kuhilela imidwebo eziyinkimbinkimbi izindonga egumbini lokugezela, usebenzisa imibala emibili noma ngaphezulu, isibonelo, nombala owodwa.
Awu, bese uqhubeke ngqo inqubo.
Ukulungiselela ngenxa yokudweba izindonga yokugezela
Ngokwengxenye enkulu, ke akuhlukile ukuthi kwenziwe i-nanoma yiziphi izakhiwo. Isimo main - ebusweni kumele kube flat futhi abushelelezi. Ngakho into yokuqala okudingeka uyenze - kuyinto ukuqeda ezinengilazi ubudala (oilcloth, uwoyela upende, ngomcako, ama-tile, njll ...). Khona-ke udinga ukuhlola odongeni. Kungenzeka ukuthi kuzothatha kubo kuqala isixazululo yokululama usimende, uma kuyintando engalingani kakhulu. Uma ebusweni amathonsi kuyinto ngempela ukubekezela, khona-ke ungakwazi yeka le nqubo, ukukhubazeka ezinkulu kwalungisa ngodaka kanye ebusweni ngokwayo icekelwa phansi ngokuphindaphindiwe spackling. Khumbula, ngemva kusendlalelo ngasinye kuyinto efiselekayo primed ngokucophelela ebusweni. Ngokuphathelene nalokhu kwesibili, ungqimba yokuqedela, lapha kumelwe sizame ukuze nenze udonga lushelele ngangokunokwenzeka. Ngaphezu kwalokho, putty ingxube kufanele kuphela acrylic. A surface bushelelezi ingatholakala eqothula ungqimba wokugcina lokukhuhla emihle noma Mesh Oqondisa inkambo izici ezincane ngokungeza fillers. izindonga yokugezela for Umdwebo primed izikhathi eziningana, ngezikhawu amahora okungenani eziyisithupha qiniseka ukusebenzisa primer, eyabika esikhathini ngezithako zawo ejenti antifungal.
inqubo Umbala: izincomo
Ukulungiselela yokugezela izindonga for Umdwebo - kungcono kuyigxathu. Khona-ke kukhona inqubo staining kuqondile kakhulu. Kungakuhle ukuthi kungaba mnandi ukuba isibhamu. Naye futhi umsebenzi ihamba kahle, futhi indlela yokwakheka ebusweni amanga flat. Kodwa lapho alulona olwawo wonke umuntu. Ngakho-ke, esimeni lapho bengatholi yawo, enqubeni ukudaya kungcono ukusebenzisa ibhulashi noma roller. Eyokuqala isicelo lemahlanganweni, kanti eyesibili - phezu flat. Ngaphezu kwalokho, ezindaweni lapho umbala ukuhwebelana (phakathi kwezindonga kanye ophahleni, isibonelo) kuhlelwa, kuyatuseka ukusebenzisa itheyiphu ukugqiba, okuyokwenza i staining olunembile. Udinga ukuze upende izingqimba ezimbili. Eyokuqala sisetshenziswa ohlangothini mpo, kanti eyesibili - in the isiqondiso ovundlile. Njengoba for ukugeleza inki, kubalulekile ukuba ancike yokuthi ilitha ingambozwa ezingaphezu kweyodwa we "square" we ebusweni. Ikakhulukazi efanele kukhona izibalo kulezo zimo lapho kuhlelwe ukuba ubambe staining e tints eziningana futhi tint Ukwakheka, njengoba kwaba njalo endabeni ka-ukuntula kwayo, okwesibili ukukhiqiza nombala ofanayo ngeke neze eziyinkinga.
Nokho, ngaleso sikhathi - indlela yokwenza yokugezela ukuze uthole ezikhangayo ngempela ngokuya lokubhalela.
Ngisho noma wenza ophahleni mhlophe futhi izindonga, ngisho self-ezinemibala, kodwa elikhanyayo, kuzoba umqondo omuhle. Kodwa okuthakazelisa kakhulu ukuthola i-decor yokugezela, uma uthatha eyodwa, kodwa shades eziningana. Kubukeka inhlanganisela olukhulu imibala hlangothi - omnyama nomhlophe, isibonelo. It singasetshenziswa inhlanganisela iyashintsha iyaphupha ibe shades imibala ezibandayo - blue kanye Mint. It singasetshenziswa indlela umyela - ukusetshenziswa nombala ofanayo kodwa ezihlukile ahlukahlukene okujula. Kufanelekile futhi ngezinye izikhathi inhlanganisela imibala okungafani - .. Orange futhi ziluhlaza okwesibhakabhaka, ziphuzi futhi omnyama, njll Ngokuvamile, ligunya lekukhetsa kabanti. Into kuphela okufanele sicatshangelwe yokuthi umbala engathandeki egumbini elincane amathoni amnyama - kusukela kule uyobheka ngisho ezincane.
Kubukeka omkhulu ezindongeni strip, kokubili mpo futhi enezingqimba. Bangenza abakuthandayo futhi onjengomlilo, futhi kungenzeka ukudaya bonke ubuso lokuqala omunye umbala, bese ukusebenzisa strip phezu amathoni emnyama umthunzi efanayo.
Esikhundleni bands zingenziwa ebanzi ngokufaka umbala eyinhloko - okubizwa ngokuthi panel, ngesimo izikwele, calandze. By endleleni, ukuze bawele umngcele zazitholakala alinganayo, kumelwe zihlukaniswe okufanayo ukumaska tape. Hhayi-ke, uma akusebenzanga - akunandaba kakhulu. Kungaba ukunamathiselwa egama-emaphethelweni plastic, pre-imibala.
Lapho ukulungisa wenziwa ikamelo ezifana yokugezela izindonga bese enamathela kungase kwenziwe kusetshenziswa indlela ugcizelele. Ngokwesibonelo, zonke izindonga ukwenza ethambile iyashintsha iyaphupha ibe shades, futhi omunye, isizwe esivelele kakhulu, ukupenda amaqiniso abonisa okuphambene e ithoni, kodwa uhlelo lwemibala eliqhakaze ngempela.
Futhi inketho kuhle. Nokho, umsebenzi kufanele kube ngempela kukhathaza. Okokuqala udinga ukupenda udonga e umbala ongaphambili, bese wenza yomdwebo olunzulu, bese unamathela ku imingcele ngamunye okwedayimane ukumaska eteyipini, bese achaza umthunzi ezahlukene lozenges.
samuntu kakhulu, umbala usebenzisa ama-stencil ngeke abangele noma ibuphi ubunzima. Ngokuqondene yokugcina, bangaqondiswa sithengwe esitolo, noma ukuzenzela okwakho.
Yiqiniso, uma isinqumo ukulungiselela egumbini ezinjalo, njengoba yokugezela, izindonga ngesineke, kumele ukhumbule into eyodwa: kungakhathaliseki kungaba kanjani ngekhwalithi ekhethiwe upende, esiningi ngeke asavela namachashaza ukuchayeka njalo umswakama, ikakhulukazi ezindaweni lapho ulwazi awela emanzini - okungukuthi, phezu okugeza. Ukuze ugweme lokhu, ungenza uhlobo iphinifa zokuzivikela - ngokwesibonelo, babiza lezi zingxenye ingilazi noma obala plastic panel. Noma glue KaMose tile. Akukona ukukhetha okubi - panel ekhethekile eyenziwe zobumba, okungaba namuhla ngaphandle kwezinkinga ezitolo eyolanda umbala decor eyisisekelo (ie upende). Enye indlela okudingeka bashintshashintshe ngayo - ukumboza izindonga kakade ibhecwe upende manzi. Futhi ke ngokuqinisekile ngeke wesabe lutho umswakama!
Izindonga efulethini kuka ukuqedela, ngaphandle sangemuva?
Inkampani "Beaver Master": ophahleni imisiwe. Izibuyekezo kwekhasimende
Umqondo womthetho wezabasebenzi
"Gentamicin-Agos" Ngalokho wamafutha? Izinkomba ukusetshenziswa
Jewel Sahara Boutique Resort Indawo abantu abajwayele 4 *, Hurghada, incazelo Egypt Ihhotela, ukubuyekezwa
Ukucubungula: ukubhala nokulungiselela